Sunday April, 18 2021 - 09:29:47
Tuesday April 06, 2021 - 08:40:01 in by salman abdi
Marlo Solero, oo ka mid ah taliyaasha ciidamada ayaa sheegay in aysan jirin ciqaab jireed loo geysto dadka lagu helo in ay jebinayaan sharciyada bandowga, balse wuxuu intaa ku daray in haddii lagu helo saraakiishu inay sameeyen ciqaabtan sababtay geerida ninkaan aan loo dulqaadan doonin.
Haddii ay ku guuldareystaan inay sameeyaan isla waqtigaas, waa inay ku celiyaan ciqaabta boolisku ku amreen ayuu yiri qofka ay ehelka yihiin ninka dhintay . Shaqsiyaadka lagu eedeyay jabinta sharciga bandowga waxay dhammeyen 300 oo jimicsi oo marna ay fariisanayaan marna istaagayaan.
Mr Penaredondo wuxuu guriga tagay subaxdii jimcaha isagoo xanuun dareemaya, ayuu yiri walaalkiis.
Xaaskiisa ayaa u sheegtay warbaahinta maxalliga ah inuu dareemayay dhibaato xoogan oo ka soo gaartay Jimcisiga
Duqa magaalada General Trias City oo lagu magacaabo Ony Ferrer, ayaa sheegay inuu amar ku bixiyay in taliyaha booliska uu arrintaan baaritaan ku sameeyo si loo xaqiijiyo falkaan la sheegay inay ciidamadu gaysteen.
Mr Ferrer wuxuu intaas ku daray inuu la xiriiray qoyska Mr Penaredondo.
Hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa dhawaan ka digtay xadgudubyada booliska Filibiin ay dadka u gaystaan kuwaas oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha .
Madaxweynaha dalkaas Rodrigo Duterte oo khamiistii khudbad jeediyay ayaa isna muwaadiniinta dalkiisa uga digay inay jabiyaan sharciyada xayiraadaha xanuunka Covid-19 ee dalkaas lagu soo rogay taas oo uu muujiyay in ay boolisku tallaabo ka qaadi karaan cidii aan hoggaamsamin.
17/04/2021 - 16:16:36
Axmed Madoobe''Farmaajo dalka god Madow ayaa Uu ku riday.
17/04/2021 - 12:26:35
Dadaal lagu doonayo in lagu soo iibiyo mishiinka Ogsajinta Magaalada Lascanood dhaliya ayaa u muuqda midha dhal
14/04/2021 - 13:58:04
Gudaha:-Masuuliyinta Ceerigaabo Oo Ka Qayb Galay Munasibad Lagu Dahfurayey Cisbitaalka Sanaag Spishaalati.
13/04/2021 - 17:30:34
Madaxweynayaasha Dowlad Gobolleedyada Puntland iyo Jubbaland oo Muqdisho ka dhoofay
13/04/2021 - 17:22:16
Hoggaamiyayaasha Soomaalidu waa in bisha Ramadaan uga faaidaystaan dib u heshiisiin iyo midnimo"James Swan
13/04/2021 - 13:18:30
Midowga musharixiinta '' Waxaan si adag uga soo horjeednaa muddo korarsiga aan sharciga aheyn
13/04/2021 - 13:14:39
Madaxweyne Farmaajo oo soo dhoweeyay sharciga jihaynta doorashooyinka Soomaaliya
12/04/2021 - 17:26:32
Baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyay in muddo labo sano ah lagu soo diyaariyo doorasho qof iyo cod ah
12/04/2021 - 17:18:37